Duulimaadyadii Muqdisho Oo Baaqday iyo Amaniga Madaarka Aadan Cade Oo Khalkhal Galay Kadib Qaraxii Diyaarada Daalo Soo Gaadhay - Somaliland Post
Home News Duulimaadyadii Muqdisho Oo Baaqday iyo Amaniga Madaarka Aadan Cade Oo Khalkhal Galay...
Duulimaadyadii Muqdisho Oo Baaqday iyo Amaniga Madaarka Aadan Cade Oo Khalkhal Galay Kadib Qaraxii Diyaarada Daalo Soo Gaadhay
Muqdisho(SLpost) Diyaaradihii Caalamiga ahaa ee Garoonka Aadan Cadde ee Magaalad Muqdisho imaan jiray ayaa intooda badan maanta baaqday, kaddib qarax shalay ka dhex dhacay diyaarad ay lahayd shirkadda Daallo Airlines, taasoo baadhitaankedi uu weli socdo.
Wararka ayaa sheegaya in Diyaaradda Turkish Airlines oo joogo u imaan jirtay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho maalin kasta ayaan iman saddexdii casho ee lasoo dhaafay, iyadoo aan la ogeyn illaa sababta ay Duullimaadyadii ay maalin walba ku imaan jirtay Garoonka diyaaradaha Muqdisho ay u joojisay.
Sidoo kale, Wararka intaas ku daraya in diyaaraddii Daallo Airlines ee shalay uu ka dhacay Qaraxa ay wadday Rakaab ay Qaadi lahayd Turkish Airlines si ay Jabuuti uga sii Qaaddo, iyadoo saraakiisha Waaxda duulista Soomaaliya ay sheegeen in aysan ogeyn sababta ay ku maqan tahay Turkish Airlines.
Agaasimaha Hay’adda Saadaasha Hawada iyo Duulista Somalia, C/wahaab Sheekh Cumar ayaa sheegay inay weli socdaan baadhitaanno ku saabsan shilkii shalay qabsaday diyaaraddii Daallo Airlines, muddo dhowna ay soo saarayaan warbixin ku saabsan shilkii dhacay.
Waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in baadhitaanka shilkan ay wadaan khuburo dowladda Somalia ka tirsan iyo hay’adaha dhanka ammaanka ka shaqeeya, iyadooo baadhitaanka lagu sameynayo diyaaradda, qofkii ka dhacay iyo weliba waxyaabo kale oo la xidhiidha baarista.
Diyaaradaha aan Maanta soo cago-dhigan garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah; Jubba Airweys, marka laga reebo Diyaarad yar oo ka Timid Hargeysa, Diyaaradda Daallo Airlines iyo diyaarado kale, laakiin waxaa timid diyaaradda 540 oo ka mid ah kuwa caalamiga ah.
Inkastoo hay’adaha amniga DF Soomaaliya aysan weli kasoo saarin warbixin dhameystiran Shilkii ka dhacay Gudaha Diyaaradaha Daallo Airlines ee dib ugu soo laabtay Muqdisho; ayaa haddana wararka hoose waxay sheegayaan inuu ahaa shilku uu ahaa mid qarax ah oo gudaha diyaaradda ka dhacay.
Ugu dambeyn, Ruux ka dhacay Diyaaradda oo Rakaabka ka mid ahaa ayaa laga soo helay Meydkiisa meel ku dhow degmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe, kaasoo la sheegay inuu Fadhiyay Qaybta uu Qaraxu ka dhacay, Waxaana Meydkiisa lasoo Gaadhsiiyay Muqdisho.